네이버 웹툰 - Naver Webtoon 1.16.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.16.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား 네이버 웹툰 - Naver Webtoon
네이버 웹툰 - Naver Webtoon ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Naver Webtoons အပေါ်နေ့စဉ်အသစ် webtoons ထွက်များစစ်ဆေး!
အားလုံး webtoons အမြင်ရေတွက်, update များသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူသင်တို့အဘို့အရှာနေတရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
webtoons အော့ဖ်လိုင်းပျော်မွေ့ရန်သင့်စာဖတ်ခြင်းသမိုင်းသင်ဖတ်ကနောက်ဆုံးစာမျက်နှာကနေစာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်အား menus တွေအောက်မှာသုံးပါ, သို့မဟုတ် '48 -Hour ယာယီကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် '' ။ သင်တို့သည်လည်းအဖြစ်မကြာမီသင်အကြိုက်ဆုံး webtoons updated နေကြတယ်အဖြစ်အကြောင်းကြားရ '' အသိပေးချက်များ '' ကိုသုံးနိုင်သည်။
app ကိုသုံးနေစဉ်သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများရှိပါက Naver Webtoons ဖောက်သည်စင်တာပေါ်တွင်သင်၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ (http://me2.do/FIvD1Tli)​​ သို့မဟုတ်ချိန်ညှိကျေးဇူးပြုပြီး> သင့်ရဲ့ app ကိုအပေါ် Naver Webtoons ဖောက်သည်စင်တာ။
네이버 웹툰 - Naver Webtoon အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
네이버 웹툰 - Naver Webtoon အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
네이버 웹툰 - Naver Webtoon အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
네이버 웹툰 - Naver Webtoon အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.6k 28.01M
네이버 웹툰 - Naver Webtoon ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း 네이버 웹툰 - Naver Webtoon အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.16.3
ထုတ်လုပ်သူ Dark Horse Comics
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://member.webtoon.naver.com/policies/privacy/
App Name: 네이버 웹툰 - Naver Webtoon
Release date: 2019-07-09 02:52:09
네이버 웹툰 - Naver Webtoon APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ